Diyaarad Ruushku leeyahay oo ku dhacday buur ku taal Turkiga oo dishay dhammaan dadkii saarnaa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Turkiga » Diyaarad Ruushku leeyahay oo ku dhacday buur ku taal Turkiga oo dishay dhammaan dadkii saarnaa
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga • Wararka kala duwan
Dhowr diyaaradood oo dab -damis ah ayaa Ruushku u diray Turkiga si ay uga caawiyaan ummadda halganka ay kula jiraan dab -damiska, kaas oo haleelay usbuucii la soo dhaafay.
Diyaaraddii dab -demiska ee Ruushka ayaa maanta ku burburtay Turkiga.
Diyaaradda ayaa sida muuqata awoodi weyday inay sare u kacdo ka dib markii ay biyaha ku shubtay dab -damiska.
Illaa iyo hadda, ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan sababaha shilku u dhacay.
Diyaaradda dab-demiska ee Beriev Be-200 ee Ruushka ayaa Sabtidii ku burburtay buurta ku taalla koonfurta gobolka Marash ee dalka Turkiga.
Qof kasta oo saarnaa ambiib Noqo-200 diyaarad - duuliyeyaashii Ruushka iyo saraakiil Turki ah - ayaa la dilay.
Sida laga soo xigtay Ruushka Wasaaradda Difaaca, waxaa saarnaa diyaaradda shan askari oo Ruush ah iyo saddex sarkaal oo Turki ah.
Diyaaradda ayaa burburtay wax yar kadib markii ay sii daynaysay biyaha mid ka mid ah oo kacsanaa Dabka Turkiga. Diyaaradda ayaa sida muuqata awoodi weyday inay hesho joog ku filan ka dib markii ay daadisay rarkeedii, waxayna ku dhacday buurta.
Illaa iyo hadda, ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan waxa sababi kara shilka. Milatariga Ruushka ayaa durba u diray Turkiga koox baarayaal ah si ay u baaraan goobta uu shilku ka dhacay.
Diyaarad dab -damis ah oo kooban ayaa loo diray Turkey by Russia si ay u caawiso umadda halganka ay kula jirto duurjoogyada, kuwaas oo ku habsaday toddobaadyadii la soo dhaafay. Sida ay ku warrantay warbaahinta maxalliga ah, diyaaradda burburtay ee Be-200 ayaa ku xirnayd waaxda dab-damiska ee Adana.